Afaka manamarina ara-dalàna ny marijuana ny Bernie Sanders amin'ny alàlan'ny baikon'ny mpanatanteraka amin'ny Andro voalohany?
Afaka Mivadika ara-dalàna ve i Bernie Andro Iray?
Fanamarinana ara-dalàna ny cannabis Amin'ny alàlan'ny Executive Executive
Hankatoavin'ny Bernie Sanders ve ny fanaovana rongony? Henoy izany ao amin'ny PodCast na Jereo ny YouTube ao Bernie Sanders ara-dalàna amin'ny marijuana amin'ny alàlan'ny Executive Order amin'ny Andro voalohany. Fantaro raha tena vitany izany - raha nandresy an'i Donald Trump izy tamin'ny fifidianana tamin'ny taona 2020 - ary koa mikapoka ny demokraty rehetra farafaharatsiny tahaka ny nataony tamin'ny korontana tany Iowa.
Misimisy kokoa momba ny baiko mpanatanteraka.
Lahatsoratra mifandraika: Fampahalalana momba ny dispensary - kitiho eto.
"Bernie Sanders dia nilaza fa te hampijanona ny 1% izay tsy mankasitraka ny fanajan-dalàna rongony ary omena ny 98% izay. Ary tsy misy miliardera afaka manakana azy tsy hamoaka ara-dalàna ny marijuana amin'ny alàlan'ny didim-pitondrana - nefa afaka ny lalàm-panorenana?
Salama, izaho Tom ary azonao atao ny mahita ahy amin'ny alàlan'ny mpisolovava rongony googling ary manindry ny tranokalan'ny mpisolovava orinasa cannabis.com - loharanom-pahalalana bebe kokoa momba ny indostria - izay mitondra antsika - Afaka manambara ara-dalàna ny rongony ve i Bernie Sanders? asa?
Ny andininy faha-2 amin'ny lalàm-panorenana dia mamela ny hetsika ataon'ny mpanatanteraka amin'ny fampiharana ny lalàna. Nieritreritra i Donald Trump fa mamela azy hanao izay tiany ny Andininy faha-2 - ary toa manamafy izany ny fitsarana ambaratonga voalohany. Inona marina no lazain'ny andininy 2 - tsy hoe: tokony hitandrina izy mba hotanterahina am-pahatokiana ny lalàna. Andininy 2 Fizarana 3
Inona ny baiko mpanatanteraka malaza indrindra? Fanambarana Emancipation 1863 - izay midika fa i Abe Lincoln dia tsy maintsy nihevitra ny fanandevozana ho tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana - na eo aza ny fanitsiana faha-13 tsy nitranga raha tsy tamin'ny 1865.
Tsy nanomboka nantsoina hoe Orinasa Mpanatanteraka izy ireo raha tsy tamin'ny 1907. Tamin'ny 1952 - napetraky ny filoha Truman ho eo ambanin'ny fifehezana federaly ny vanja vy rehetra - mba hahafahan'i bernie sanders manao zavatra tsy dia sosialista ve ary manara-dalàna ny rongony amin'ny alàlan'ny baiko mpanatanteraka?
Inona ny fetran'ny Filoha Executive Order Powers?
Lavitra loatra ny fihetsik'i Trumans - ny fanandramana hanao lalàna fa tsy ny hanazavana ilay zavatra. Ny lalàna mifehy ny zava-mahadomelina dia miampanga ny mpisolovava mba hamerina handamina indray ny zavatra ilaina amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fitantananana - izay midika fa ny sampana mpanatanteraka dia afaka manova ny fandaharam-potoana - saingy azon'izy ireo atao ve ny misintona ny fizotrany?
Ahoana raha mino ny teniko foana i Bernie ary ny fandrarana ny rongony dia lalàna manara-penitra tsy mifanaraka amin'ny lalàmpanorenana izay tsy mahomby ny fototry ny fanadinana hipoitra ho an'ny mozika lalampanorenana? Moa ve ny hetsika nataony dia ny asan'ny mpanatanteraka amin'ny fanohanana ny lalàm-panorenana momba ny fizotry ny fifidianana izay nataon'ny Kongresy tamin'ny taona 1970?
Ahoana raha toa ka lasa lavitra loatra izany - mety, ny Kongresy dia afaka mihetsika hanala ny didim-pitondrany - saingy amin'ny fanesorana rongony amin'ny CSA - tsy mila ampiharina izany. Ka tsy maintsy mitory azy izy ireo. Angamba fanjakana tena kianja - toa an'i Idaho na Indiana no hitory an'i Etazonia. Mety handany fotoana vao hiasa.
Ka raha mino i Bernie fa tsy mifanaraka amin'ny lalàm-panorenana ny fandaharam-potoana i Marijuana ankehitriny ary ny tsy fitovian'ny firazanana amin'ny fampiharana sy ny fiandohan'ny lalàna dia manohana ny finoany - azo antoka fa mahavita azy izy.
Saingy mety hijanona tsy ho amin'izany intsony izy ary hitarika ny fitantananany mba tsy hampihatra ny lalàna rongony federaly fotsiny satria ny fibaikoana ny vaomiera mpanatanteraka lehibe rehefa misy manararaotra ny fahefany amin'ny alàlan'ny fanaovana lalàna tsy hanaiky ny fankatoavan'ny kongresy ary miala amin'ny mandika efa misy.
Maninona no nahatonga an'i Bernie Sanders hanao ara-dalàna ny marijuana amin'ny alàlan'ny Order Executive
Raha izany no izy dia vitany ihany ny manao izany - saingy mety tsy hampiharina aorian'ny fanamby ara-dalàna izany.
Angamba ny famolavolana ny baiko mpanatanteraka dia mety mitana andraikitra lehibe - ohatra ny fitarihana ny fitantanan-draharahany tsy hampihatra ny lalàna marijuana fa tsy hanao fanitsiana mpanao lalàna ary esorina amin'ny CSA izany.
Azo antoka fa mety hampiady hevitra izany - Toy ny tamin'ny 1940 izahay dia nanangona ny Amerikanina Japoney ary nametraka azy ireo tany amin'ny toby.
Orehefa nandao ny sekolim-panjakana izahay Eisenhower. Ireo baiko ireo dia nampiady hevitra tamin'io fotoana io - fa tsy nihaika ho fanoherana.
Malaza be ny fanarahan-dalàna rongony - malaza tokoa ka azoko antoka fa mankafy ny tiana ianao ary misoratra amin'ny vaovao momba ny legalisasy rongony. Alarobia amin'ny 2:00 hariva.
Ka eo ianao no manana azy - Bernie dia afaka manoratra baiko mpanatanteraka tanteraka
Aza manome tsiny ahy - hadisoan'ny Internet izany:
Bernie Mampanantena amin'ny Marijuana misy ara-dalàna amin'ny andro voalohany - Afaka manao izany ve izy?
Nosoratan'i: David Silvers
Tamin'ny alin'ny Côculo Iowa, ny senatera Bernie Sander (I-VT) Nampanantena mba hanara-dalàna ny rongony rongony rehetra amin'ny fanjakana 50 tamin'ny andro voalohany niasany, "tamin'ny alàlan'ny baiko ekena." Nampanantena ihany koa i Sanders fa handany ny rakitsoratra olona nosamborina, angamba avy amin'ny aingam-panahy avy amin'ny Governemanta Pritzker ao Illinois.
Toy ny fampanantenan'ny fampielezan-kevitra rehetra, misy sakana ara-dalàna sy azo ampiharina. Ny lalàna mifehy ny Zava-mifehy, izay mandrara ny rongony amin'ny laha-federaly. Nisy dia nisy long history ny fanandramana tsy nahomby nampahatsiahivina ny zava-mahadomelina ao ambanin'ny CSA. Ny CSA koa mamela ny mpisolovava foibe hamerina ny valan-jaza amin'ny alàlan'ny fizotran'ny fitantanana, ka izany no tsy hialan'ny Kongresy. Na izany aza, ny elanelam-pitsipika dia lava sy be atao amin'ny birao, ary azo antoka fa tsy zavatra avy amin'ny Sanders na misy olona afaka miditra amin'ny Andro voalohany. Aza hadino mihitsy, mazava ho azy fa mety tsy hanamafy ny mpisolovava azy ny Sanders tamin'ny andro iray.
Misy iray hafa azo atao. Tamin'ny 2013, ny solombavambahoaka jeneraly James Cole, nanompo tao amin'ny Obama Administration, dia nametraka tsianjery ny "Torolàlana momba ny fampiharana ny marijuana", izay fantatra amin'ny anarana hoe mahazatra Cole Memorandum. Ny Cole Memo dia tena nametraka politika tao amin'ny sampam-pitsarana mba hanafoanana ny fampiharana ny CSA any amin'ireo fanjakana izay nanara-dalàna ny marijuana. Tamin'ny taona 2018, ny Jeneraly-mpisolovava Jeff Sessions dia nanafaka ny Cole Memo ary namela ny fampiharana ny CSA amin'ny fiheveran'ireo mpampanoa lalàna federaly teo an-toerana. Ny memo mpisolo toerana ny mpisolovava dia ny pejy iray, izay mampiseho fa mora miova ny politika federaly.
Azontsika atao ihany koa ny manintona fomba fijery vitsivitsy avy amin'ny sehatra hafa, dia ny fifindra-monina. Ny administratera Obama dia nametraka politika roa momba ny fifindra-monina, DAPA (Hetsika ho an'ny ray aman-dreny ny Amerikanina) ary DACA (Hetsika ho an'ny asa fanirahana zaza). Ny DAPA sy ny DACA dia mialoha ny hevitra Fampandrenesam-pahefana, na ny hevitra fa ny fampiharana ny lalàna dia manana ny fahalalahana manapa-kevitra hoe rahoviana no hampihatra ny lalàna mifototra amin'ny fiheverana toy ny fanakorontanana ny loharanom-pahalalana sy ny halehiben'ny fanitsakitsahana ny lalàna. Ny filazan'ny besinimaro, ny DAPA sy ny DACA dia fandaharan'asa izay tsy eken'ny governemanta ny hampihatra ny lalàna mifindra monina sasany amin'ny sokajy sokajin'olona.
DAPA dia notanterahina tany amin'ny Fitsarana Tampony tamin'ny raharaha 2015 tamin'ny Texas v. Etazonia, izay nisy ny fizarazarana 4-4 an'ny Fitsarana no nandao ny fandaharana. Vao naheno ny Fitsarana Tampony ny fanamby ho an'ny DACA Departemantan'ny fiarovana amin'ny tanindrazana v. Regents an'ny University of California, miaraka amin'ny fanapahan-kevitra antenaina tamin'ny jona 2020. Na dia raharaha momba ny fifindra-monina aza izany dia mety hilazana amintsika ny momba ny halavan'ny governemanta federaly, na amin'ity tranga ity ny filoha Sanders, dia mety haniliky ny fampiharana ny fizarana iray amin'ny lalàna federaly.
Ary ahoana ny fikasan'i Bernie hamela ny heloky ny olona marobe noho ny fananany rongony? Toa fanontaniana mandeha lavitra kokoa io. Ny fahefan'ny famelan-keloka nataon'ny filoha dia voarakitra ao amin'ny Andininy II, Fizarana 2, Andininy 1 amin'ny lalàm-panorenana amerikana. Manome amin'ny fomba tsotra fa “[izy] Filoham-pirenena… dia manana fahefana hanome ny famerenana sy famotsoran-keloka ho fanoherana an'i Etazonia, afa-tsy amin'ny tranga fanenjehana.” Na dia voafetra amin'ny fandikan-dalàna federaly aza ny fahefan'ny famotsoran-keloka (ary noho izany dia tsy mihatra amin'ny fanamelohana marijuana an'ny fanjakana), ekena amin'ny ankapobeny fa tsy misy fetra hafa misy dikany amin'ny fahefan'ny famelan-keloka nataon'ny filoha.
Mazava ho azy fa mety ho hypothetical tanteraka izany rehetra izany - tsy fantatsika raha hisy filoha Bernie, na koa ny Nomena Démokratika. Fa toy ny raharaha azo ampiharina sy ara-dalàna? Ny manam-pahefana toa milaza an'izany Eny afaka izy!